यस्तो छ २०१७ मा बढी कमाउने १० बलिउड फिल्मको सूची - IAUA
यस्तो छ २०१७ मा बढी कमाउने १० बलिउड फिल्मको सूची
ramkrishna November 6, 2017	यस्तो छ २०१७ मा बढी कमाउने १० बलिउड फिल्मको सूची
यस बर्ष रिलिज भएको ‘बाहुबली–२’ ले कमाईका हिसाबले सबै रेकर्ड तोड्न सफल भयो । रिलिजको पहिलो दिनमै यो फिल्मले ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै बलिवुडको सबैभन्दा ठूलो ओपनर सिनेमा बन्न सफल भएको छ । यस फिल्मको हिन्दी संस्करणले बक्स अफिसमा ५११ करोड रुपैयाँ कमाई गरेको थियो । निर्देशक एसएस राजामौलीले निर्माण गरेको ‘बाहुबली–२’ ले हिन्दी भाषी क्षेत्रमा ५ सय करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।
दीपावलीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको रोहति शेट्टीको फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ले चार दिनमा एक सय करोड को आँकडा पार गरेको थियो । प्रर्दशनको १० दिनपछि यो फिल्मले १६७।५२ करोड कमाएको छ । यो फिल्म अजय देवगनको अहिलेसम्मको करियरकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म समेत बनेको छ ।
वरुण धवनको फिल्म ‘जुडुवा–२’ अर्को धेरै कमाउने फिल्म बनेको छ । डेविड धवनद्वारा निर्देशित यो फिल्ममा वरुणसँग तापसी पन्नु र ज्याकलिन फर्नान्डिजले अभिनय गरेका छन् । यो सिनेमाले बक्स अफिसमा १३८ करोड रुपैयाँ कमाई गरेको थियो ।
शाहरुख खानको फिल्म ‘रईस’ले बक्स अफिसमा जबरजस्त कमाई गरेको छ । सिनेमामा शाहरुखको विपरित पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान देखिएकी थिइन् । सिनेमाले कयौं विवादको सामना समेत गर्नु परेको थियो । तर पनि यो फिल्मले १३७।५१ करोड कमाएको छ ।
५. ट्वाईलेट : एक प्रेम कथा
अक्षय कुमार र भूमी पेडनेकरकी जोडीलाई दर्शकले सिनेमा घरमा दिल खोलेर प्रेम दर्शाए । अक्षय कुमारले यो सिनेमा मार्फत देशमा शौचालय समस्यासँग जुधी रहेका महिलाको अधिकारका बारेमा आवाज उठाएका थिए । यो फिल्मले बक्स अफिसमा १३४।२२ करोड रुपैयाँ कमाई गरेको थियो ।
सलमान खानको यो सिनेमा बढी आम्दानी गर्ने सिनेमाको सातौं स्थानमा छ । कबीर खानको निर्देशनमा बनेको ‘ट्युबलाइट’मा सलमान खानले अभिनयमा फरकपना ल्याउने प्रयास गरेपनि दर्शक तान्न असफल रह्यो । यो सिनेमाले बक्स अफिसमा ११९।२६ करोड आम्दनी गरेको थियो ।
७. जोली एलएलबी–२
अक्षय कुमारको ‘जोली एलएलबी–२’ ले पनि बक्स अफिसमा शानदार कमाई गरेको छ । ४५ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएको सिनेमा लगानीको दुई गुना कमाई गरेर हिट सिनेमाको सूचीमा स्थान बनाउन सफल भयो । यसमा अक्षय कुमारको विपरित हुमा कुरैशी देखिएकी थिन् । यो फिल्मले ११७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
८. बद्रीनाथकी दुल्हनिया
वरुण धवन र आलिया भट्टको जोडीलाई दर्शकले ‘बद्रीनाथकी दुल्हनिया’मा अत्यन्तै मन पराएका थिए । यो फिल्मले ११६।६८ करोड कमाएको थियो ।
ऋतिक रोशनको ‘काबिल’ फिल्मले बक्स अफिसमा आफ्नो शक्ति देखाएको थियो । शाहरुख खानको रई्ससँग जुधाएर प्रदर्शनमा ल्याइएको ‘काबिल’ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरेको छ । यो फिल्ममा ऋतिकले अभिनय गरेको क्राइम थ्रिलरलाई दर्शकले अत्यन्तै मन पराएका थिए । फिल्मले १०३।८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
निर्देशक मिलन लुथरियाको ‘बादशाहो’मा अजय देवगन, इमरान हासमी, विद्युत जमवाल, इलियाना डिक्रुज, ईशा गुप्ता र संजय मिश्रा जस्ता कलाकारले अहम् भूमिका निभाएका थिए । बक्स अफिसमा धमाकेदार सुरुवात गर्न सफल यो सिनेमा ठूलो आंकडा कायम गर्न असफल रह्यो । एजेन्सी
Previous Previous post: कट्रिनादेखि शाहरुखसम्म, यसकारण गिनिज बुकमा नाम लेखाए यी कलाकारले
Next Next post: यौनाङ्ग चिलाउँने समस्या यसो गर्नुहोस्